किन बर्खास्त भए स्याङ्जालि सहसचिव बिष्णु ढकाल ? – On Khabar
काठमाडौँ — विवादास्पद रुपमा नियुक्त लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद ढकाललाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ । अनियमिततामा मुछिएका र अख्तियारको कारवाही सिफारिसमा परेका तत्कालीन सहसचिव ढकाललाई सरकारले गत साउनमा लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य-सचिवमा नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो । नियुक्ति लगत्तै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण उनी दुई दिनभन्दा बढी काम गर्न पाएका थिएनन् ।
५८ वर्षे उमेरहदबाट अवकाश हुनुअघि नै राजीनामा दिएर कोषमा नियुक्त हुने प्रयासमा रहेका सहसचिव विष्णु ढकालको ‘ट्रयाकरेकर्ड’ निर्विवाद छैन। उनी जिल्ला विकास समिति ललितपुरमा हुँदा गाविसहरुको विनियम बनाउन ४१ लाख रुपैंया निकासा दिने विवादास्पद निर्णयमा सामेल भएका थिए। कान्तिपुरले नै उक्त घटनावारे सार्वजनिक गरेपछि भुक्तानी भइसकेको २९ लाख रुपैंया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निवेदनमा असुलउपर भएको थियो।
नख्खु खोला किनारवाट १२ मिटर छाडी सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा खोलैखोला सडक बनाएको देखाई जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट ६३ लाख ४१ हजार रुपैंया खर्च भएको थियो। जिविसले ७० लाख रुपैंयाको सम्झौता गरी ३४ लाख ४० हजार भुक्तानी गरेको थियो। सोही योजनाका लागि ‘कृषि तथा स्थानीय सडक’ कार्यत्रमबाट चारपटकमा ३० लाख ६० हजार निकासा भएको थियो। ढकाल सहित तत्कालीन दलीय संयन्त्र समेत उक्त सडक निर्माण विवादमा मुछिएको थिए ।
गृहपृष्ठ यौन/स्वास्थ्य शिक्षा समाचार
जिन्सको टाईट पाइन्टले गराउँछ नसासम्बन्धी समस्या !
Spread the love अनखबर अहिले जिन्सको कपडाको प्रयोग नगर्ने मानिस नै हुँदैन भन्दा फरक पर्दैन । विभिन्न डिजाइनका जिन्सका पाइन्ट र ज्याकेटहरु लगाउने युवा पुस्ताको ठूलो जमात रहेको छ । आकर्षक देखिने भएकाले जिन्स सबैको रोजाइमा पर्छ । तर जिन्सको प्रयोग गर्दा धेरै कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । कसिला खालका जिन्सका कपडा प्रयोग गर्दा […]
रवीन्द्रमाथी राजनीति सुरु: श्रद्धान्जली नसक्दै चुनावको चर्चा, उपनिर्वाचनमा श्रीमती विद्या कि बामदेव !
March 2, 2019 onkhabar
Spread the love अनखबर १८ फाल्गुन ताप्लेजुङमा बुधबार भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीकी पत्नि विद्या भट्टराई सक्रिय राजनीतिमा आउँने भएकी छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिकी भट्टराईलाई सत्तारुढ नेकपाले सक्रिय राजनीतिमा ल्याउने भएको हो । प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा। राजन भट्टराईकी बहिनी विद्यासँग रवीन्द्रको तत्कालिन माले नकिट अखिलको अध्यक्ष हुँदा […]
Spread the love रुकुम पश्चिम, मंसिर २ । रुकुम पश्चिममा एक व्यक्तिले आफ्नै श्रीमती र छोराको हत्या गरेका छन् । जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका–१ बल्लेजुराका ४९ वर्षीय सत्तबहादुर बुढाले श्रीमती ४२ वर्षीया इन्द्रकला बुढा र छोरा ११ वर्षीय स्वयमप्रकाश बुढाको हत्या गरेका हुन् । बुढाले शनिबार राति २ बजेको समयमा श्रीमती इन्द्रकलालाई भरुवा बन्दुकले गोली हानी र […]